Kungani ikati lami lidla ngokulangazela? | Amakati kaNoti
Kungani ikati lami lidla ngokulangazela?
UMaria Jose Roldan | | Ukudla, Curiosities
Isikhathi sokudla kufanele kube yisikhathi sokuthula kuwo wonke umuntu, noma ngabe banemilenze emibili noma emine. Kodwa kwesinye isikhathi sihlangana nekati elibonakala lijahe ukuqeda ukudla kwalo bese liqala ukwenza ezinye izinto. Yini engenziwa kulezi zimo?
Lapho ikati lami lidla ngokulangazela, ngiyazi ukuthi isikhathi sesifikile sokukhathazeka. Akujwayelekile ukuthi ngidle kakhulu futhi ngokushesha okukhulu. Ukukusiza, kubalulekile ukuthi wazi kuqala ukuthi kungani ukukwenza.
1 Kungani ikati lami lidla ngokulangazela?
1.1 Kube yikati lekati eliyintandane
1.2 Ingabe ukuhlukunyezwa
1.3 Unovalo ngokwemvelo
1.5 Ukudla okusezingeni eliphansi
1.6 Izinkinga zesithukuthezi nezingokomzwelo
1.7 Ezinye izimbangela
2 Yini ongayenza ukukusiza?
Ngokulandelayo sizobona izizathu ukuze ukwazi ukuqonda ezinye izizathu zokuthi kungani ikati lakho kungenzeka ukuthi linalo mkhuba wokudla yingakho lidla ngokulangazela.
Kube yikati lekati eliyintandane
Ikati elingazange londliwe ngumama, kungakhathalekile isizathu, livame ukukhula likunikeze isithombe sokuthi lihlale lilambile. Lokhu kungenxa yokuthi ngenkathi siyondla ngamabhodlela, siyivikela ngokweqile kangangokuthi asifuni ukuthi ilambe umzuzu owodwa, okunengqondo. A) Yebo, Omncane ukhula azi ukuthi uzohlala enokudla futhi akekho umuntu ozosho noma yini kuye ngokudla, ngakho-ke usizakala.
Kodwa-ke, umama uyawavumela amakati ukuba alambe kancane. Kufanele ukwenze uma ufuna ukuthi bafunde ukuzifunela okwabo ukudla ngoba ngeke abe eceleni kwakho unomphela.
Uma ekhaya kukhona omunye umuntu ophilayo (ikati, inja noma umuntu) ongakushiyi wedwa, okungukuthi, okukujaha noma okuqaphile ngaso sonke isikhathi, ofuna ukukubamba njalo futhi, ngamafuphi, ayikuvumeli ukuthi uphathe impilo ezolile efana nekati, kungahle kube nomuzwa wokuthi inesikhathi esincane kakhulu sokudla. Lapho ekugcineni uthola umzuzwana udla ngokushesha ngoba uyazi ukuthi kungekudala uzophinde axhashazwe.
Amakati ethukile bathambekele ekudleni ukudla kwabo ngokushesha okukhulu ukwedlula bonke abanye, hhayi ngoba bephila impilo embi kepha ngoba benjalo. Kufanele ubekezele futhi uzame ukuthola isisombululo ukugwema ukuminyaniswa.
Ikati lakho kungenzeka ukuthi likhathazeke kakhulu ngokudla ngoba ukungasuthiswa ngokwanele, ngoba ulambile futhi uma umphakela ucishe athathe umoya wakhe ukuze aqede konke.
Kungenzeka ukuthi ulambe kakhulu noma ngoba uma unamakati amaningi, kwesinye isikhathi ushiywe elambile lapho amanye amakati esidlile kumondli wakhe. Ngakho-ke Kubalulekile ukuthi uma unekati elingaphezu kwelilodwa ekhaya, ngalinye linomphathi walo ophuzayo.
Mhlawumbe kamuva, wonke umuntu udla lapho wonke umuntu adla khona, kepha kuzokwanela ukuze wonke umuntu adle isabelo sakhe esifanele futhi angalambi.
Ngokuvamile amakati angadla ngokufunwa ngaphandle kwezinkinga ngoba abela ukudla kwawo futhi ziyama lapho zisuthi. Kepha uma unekati eliminzile kakhulu, kuzofanela ulinganise imithamo yokudla.
Uma lokhu kwenzeka kuwe, kufanele wazi ukuthi amakati angadla kanye noma kabili ngosuku futhi kuzokwanela kubo uma inani lanele.
Ukudla okusezingeni eliphansi
Ungase ucabange ukuthi ukudla onika amakati akho kusezingeni elifanele, kepha empeleni akunazo izakhamzimba namavithamini abalulekile kubo ukuze babe nempilo enhle noma okungenani bazizwe benelisekile ngokudla kwabo.
Uma kunjalo, uma ngabe ngicabanga ukuthi uhlinzeka ngekati lakho kusezingeni eliphansi, kujwayelekile ukuthi lifune noma licele okunye ukudla. Awumondli kahle futhi udinga izakhamzimba! Khuluma nodokotela wezilwane wakho ukuthola iseluleko ngokufunza okumenza azizwe anelisekile futhi ngasikhathi sinye, unakekele impilo yakho ngaphakathi nangaphandle.
Amakati adinga amaprotheni nokudla okunekhwalithi enhle. Akukhathalekile ukuthi umncane noma umdala, ukudla kufanele kube kufanele izidingo zakho zomzimba, ezingokwengqondo nezingokomzwelo.
Ungakukhetha kanjani ukudla kwekati okuhle kakhulu?
Izinkinga zesithukuthezi nezingokomzwelo
Kungenzeka futhi ukuthi ikati lakho lifuna ukudla ngoba linesithukuthezi, noma ukuthi linenkinga engokomzwelo eyaziwa ngokuthi "ukungaziphathi kahle ngokwengqondo" Lokhu kusho ukuthi ikati lakho liwumlutha wokudla, nayo yonke imiphumela lokhu okungaba nayo empilweni yakho.
Uma lokhu kwenzeka kuwe kuzofanele umqeqeshe ukuguqula indlela aziphatha ngayoUma kunesidingo, kuzofanele ukhulume nesazi sokuziphatha se-feline ukuqondisa kabusha lokhu kuziphatha. Kepha lokhu kuzokwenzeka kuphela uma unezimpawu ezifana nokuthi:
Ngemuva kokudla ufuna ukudla ukudla kwezinye izilwane ngisho nokwakho
Gxuma etafuleni udle okukukho
Ubonakala edangele lapho ufaka ukudla ku-feeder yakhe
Ifuna ukunakekelwa okuqhubekayo kusuka kubanikazi babo
Udla izinto noma uzihlafune noma ngabe akukhona ukudla
Lezi zimpawu zibaluleke kakhulu ukuthi uzicabangele ngoba ngale ndlela uzokwazi ukwazi ukuthi ngabe kwenzeka ngempela yini kuwe ukulungisa lokhu ngokushesha okukhulu.
Yize esikubonile kuze kube manje kuyizizathu eziyinhloko zokuthi kungani ikati lingadla ngokukhathazeka, kunezinye okungafanele sizinqande:
Uyakuthanda ukudla kwakheUyayithokozela kakhulu kangangokuthi akakwazi ukuzibamba kodwa ayigwinye ngokushesha njengoba enza.
Uyagula: kunezifo ezithile, njenge-hypothyroidism, ukuhlushwa ukungalingani kwe-thyroid noma isifo sikashukela ukuthi phakathi kwezimpawu zabo ukwanda kwesifiso. Kepha akufanele wesabe iningi lalezi zifo liyelapheka.
Yini ongayenza ukukusiza?
Lapho imbangela isitholakele, sekuyisikhathi sokuthatha isinyathelo. Enye yezinto evame ukusebenza kahle kakhulu ukuthenga okondlayo okhethekile wezilwane ezikhathazekile, kanje:
Ngakho-ke okuncane kuzofanele usebenze kancane ukuze uthole ukudla kwakho, okuzokuphoqa ukuthi udle kancane. Kepha ngaphezu kwalokho, kubaluleke kakhulu ukuthi kunikezwe indawo ephephile nenokuthula lapho angazondla khona ngaphandle kokukhathazeka nganoma yini, njengegumbi lakho lokulala ngokwesibonelo.
Kumele futhi ukubheke lokho uma uhlukunyezwa kufanele simise imikhawulo ethile ukuze wonke umuntu ekhaya ahlale ndawonye ngenjabulo. Kufanele sihloniphe ilungu ngalinye, kungenjalo kuzovela izinkinga. Uma ungabaza ukuthi ungaliqonda kanjani ikati lakho, ku Lesi sihloko Sikunikeza okhiye ukuze ubuhlobo benu buzuzise nobabili.
Uma kungekho okunye kwalokhu okusiza ikati lakho, khuluma nodokotela wezilwane wakho noma uchwepheshe uma kwenzeka izinto zingathuthuki. Okwamanje, ungagcina lawa macebiso engqondweni:
Yinake futhi usebenzise isikhathi sekhwalithi nekati lakho
Mnike ukudla okusezingeni elifanele
Mnike ukudla okumanzi izikhathi ezimbalwa ngesonto ngaphezu kokudla kwakhe okomile
Faka amanzi amaningi azowaphuza futhi angadikibali futhi azizwe egcwele isikhathi eside
Gcina imikhuba yokudla yansuku zonke (ngokwesibonelo kabili ngosuku), noma uyinikeze izikhathi eziningi phakathi nosuku, kodwa ngamanani amancane
Uma ekucela ukudla, ungamnaki
Zama ukuvumelanisa izikhathi zakho zokudla nezabo ukuze ugweme izingxabano zesilingo
Ungamniki ukudla okwengeziwe ngoba kukwenza uzisole
Ngalezi zeluleko ikati lakho lizoba ngcono, ngokuqinisekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Ukudla » Kungani ikati lami lidla ngokulangazela?
UMarcelo, eRosario, e-Argentina kusho
Yonke imininingwane enikezwa kuleli sayithi iyasiza kakhulu: emfushane, eqondile nangolimi olunobungane. Ngiyabonga!
Phendula uMarcelo, eRosario, e-Argentina
Siyabonga ngamazwi akho, uMarcelo 🙂.
Amakati adla yedwa eneminyaka emingaki
Izimbangela ze-feline alopecia